En vente actuellement 15/11/2018
Regime mihinana voazavo dia 5 andro dia mihena
Anisan’ny voankazo azo ampiasaina atao fototry ny “régime” fampihenan-tena ny voazavo na ny “pastèque”. Ity atoro anao androany ity dia hampihena be anao ao anatin’ny 5 andro monja. Tsy dia mampijaly rahateo izy ity fa mahavoky koa aza
Ireo zava-pady 7 mandritra ny fadim-bolana
Araka ny nambaran’ireo manampahaizana amin’ny fandinihina ny tantaram-piainan’ny olombelona, dia misy fihetsika tsy tokony ataon’ny vehivavy mihitsy mandritra ny fotoanan’ny fadim-bolana. Anton’izany ny mety ho fiantraikany eo amin’ny fahasalamana.
Ny ao ambadiky ny fiainan’ireo printsy vavy
Mampitsiriritra tokoa ny fiainan’ireny printsy vavy ireny ary nofinofy mihitsy aza, rehefa mbola kely, ny ho tonga tahaka azy ireo. Fantaro anefa fa misy koa ny geja mahazo azy ireny toy ny mahazo an’i Kate Middleton sy Meghan Markle, izay samy vadina printsy…
Roulé de jambon aux légumes
Akora ilaina · Karaoty 3 · Korzety 4 · Ovy lehibe 1 · Tongolo be 1 · Tongolo gasy hasiny lehibe 2 · Persily tahony 2 · Atody 4 · Fraomazy voakiky 150g · Crème fraiche 1 sf · Jambon 100g · Sira sy dipoavatra
Taovolo mirandrana, tena lamaody !
Taovolo maneva ny vehivavy Malagasy ny randrana. Tato anatin’ny taona vitsy anefa dia tena lasa lamaody izy ity. Nivoatra dia nivoatra ihany koa ny teknika fanaovana randrana ka nahafahana namoaka taovolo isan-karazany toy ireto manaraka ireto.
Shopping « Ankizy »
1. Tennis Puma à scratch. 15.000Ar « Facebook : Lamaody Zazakely » Cont : 034 68 674 81
Glaçon : Mampateza « maquillage », manafina havizanana, mony, tasitasy …
Izay rehetra tsy metimety eo amin’ny tarehinao ka tianao hafenina na ho takomana amin’ny alalan’ny haingon-tava dia tsy ho hita avokoa rehefa mampiasa « glaçon » na ireny bolongana lagilasy ireny ianao mialohan’ny zavatra rehetra. Izy ireny mihitsy no atao « base de teint » hahafahan’ny akora rehetra hampiasainao hiasa tsara araka izay hilanao azy.
Nisy nanafina fitaovam-piadina tany amin’ny sekoly fanabeazana fototra iray, tao Frantsa
Nahitana fitaovam-piadiana maromaro nafenina, tao amin’ny toeram-pivoahan’ny sekoly fanabeazana fototra iray, tao Loiret ao Frantsa.
Vehivavy 50 taona, voasambotra noho ny fametahana fanjaitra tany anaty frezy
Vehivavy iray 50 taona no voasambotra noho ny raharaha fametrahana fanjaitra tany anaty frezy tany Aostralia. Tamin’ny volana septambra teo no nampalaza ity raharaha ity tany an-toerana.
Ankizivavikely 10 taona, nikasa hanomo tena
Nampidirina hôpitaly vonjimaika i Lilly-Jo Caldcott, ankizivavikely 10 taona, satria nikasa ny hamono tena ny andro nitsingerenan’ny taona nahaterahany.
Vehivavy manambady aho, miray trano moa izany, fa tsy vita na inona na inona.
Maditra be anefa izy sady mampirafy ahy, ka leo aho. Enim-bolana izao, miaraka amin’olon-kafa aho, tiako sady tia ahy, sady vonona ny hampakatra ahy ho vady.
« Le principal ingrédient pour toute bonne cuisine familiale est l’amour. L’amour envers ceux pour qui vous cuisinez » Sophia Loren
Isan’ny fahaizana ilaina lalandava ao an-tokantrano ny fahaizana mahandro, na ho an’ny vavy na ho an’ny lahy. Ny sakafo haroso an-databatra sy karakaraina mantsy no isan’ny mampivondrona ny ankohonana, mahatamana azy ireo ka mampiray hina sy manaparitaka fitiavana eo anivon’ilay tokantrano.
Manasitrana aretin’an-doha ny “vinaigre de cidre” … izao no atao
Ny “vinaigre de cidre” na ny vinaingitra avy amn’ny paoma, dia ahitana singa mampitony ny aretina sy ny fanaintainana samihafa. Anisan’ny sitranin’izany ny aretin’an-doha. Toy izao ny fikarakarana azy.